Umkhankaso weBrand yePPC- Ixabiso eliphantsi, ukubuya okuphezulu
Tyala imali kwiBhrend yakho ngePhulo leBrand yePPC
NgoMvulo, Agasti 29, 2011 NgoMvulo, Oktobha 12, 2015 UChris Bross
Ke uqhuba ishishini kwimarike egcweleyo. Eyona nto inokwenzeka, oku kuthetha ukuba uyaphikisana nee-CPCs ezithile ezintle zamagama aphambili. Okanye mhlawumbi ungumnini wamashishini amancinci, ongathanda ukungena kwiintengiso ezikwi-Intanethi kodwa ungaziva ngathi unohlahlo-lwabiwo mali olwaneleyo lokukhuphisana. Njengoko ukuthandwa kwe-intanethi kunye nentengiso ye-PPC ikhulile, kukwanjalo nokhuphiswano, oluthi emva koko luqhube iindleko. Ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokuba i-PPC ayikusebenzeli (okanye ayizukusebenza, ukuba awukaqali), jonga uMkhankaso weBrand.
Kumava ethu, abathengisi abaninzi be-PPC baqala ngokujolisa kumagama aphambili afanelekileyo kwaye ahambelana kakhulu neshishini labo. Ukuba uhlala kwizindlu nomhlaba, uya kubiza amagama aphambili anje ngala 'makhaya athengiswayo,' 'athenge indlu,' njalo njalo. Oku kunengqiqo egqibeleleyo, kwaye yile nto naliphi na iZiko loNcedo okanye isikhokelo kwi-PPC esiza kukuxelela ukuba wenze. Kuthekani ukuba loo magama aphambili axabisa kakhulu kuhlahlo-lwabiwo mali lwemihla ngemihla okanye lwenyanga ekufuneka ulichithile? Inyathelo lakho elilandelayo linokuba kukujonga amagama angabizi kakhulu ukuhlawula. Endaweni yokuqhubeka nokuqhuba umgodi kulawo magama aneendleko eziphantsi ezinomtsalane ezifanayo nezo zibiza kakhulu, cinga ngokwakha iphulo ngokusekwe kwimigaqo yophawu. Ngamagama 'egama,' ndithetha amagama aphambili asekwe kwigama lakho lophawu.
Njengomzekelo, siya kusebenzisa ishishini lam leti eliyintsomi TeaFor2.com kwaye uluhlu uluhlu lwamagama ahambelana nomnxeba:
Njengoko ubona, onke amagama adweliswe apha ngandlela thile ahambelana negama lophawu, teafor2.com. Ukudala iiMikhankaso zeBhrendi ezinje ngale zihlala ziyindlela elungileyo yokwakha ulwazi lwakho lophawu, kwaye usebenze umkhankaso we-PPC ophumeleleyo ngemali encinci kunokuba ubunokuchitha ukuleqa ezona zidumileyo- kwaye ke zibiza kakhulu- amagama aphambili.
Ngoku ukuba unoluvo olusisiseko lweMikhankaso yeBrand, Nazi iingcebiso ezimbalwa ekufuneka uziqwalasele xa uqalisa:
Yongeza Indawo yokuhlala kaGoogle kwiintengiso zakho kwiPhulo leBrand, ukuze ususe abasebenzisi uye kwindawo yakho kwaye ubonelele ngokhetho olongezelelweyo xa intengiso yakho ivele.
Ungalibali malunga indawo kwaye izandiso zefowuni, njengokuba. Ingakumbi ukuba ulishishini elincinci lendawo. Ukubonisa abasebenzisi kanye apho ukhoyo kunye nokubonelela ngekhonkco elikhawulezayo ukufowunela kunokukunceda ukonyusa ifuthe lentengiso yakho yePhulo leBrand.
Imikhankaso yeBrand ilungile kumashishini onyaka, njengoko ebonelela ngenkqubo yexabiso eliphantsi enokuqhutywa unyaka wonke. Umzekelo, ukuba uthengisa izinto zokubhukuda, awunakuba nomdla wokuqhuba iintengiso zakho phakathi kobusika xa ukuthengisa kwakho kuphantsi. Nangona kunjalo, ukuqhuba iphulo leBrand kuzo zonke iinyanga zonyaka kuya kugcina igama lakho phaya, kunye nokuzisa ezinye zeendlela zangaphandle kwexesha xa iintengiso zakho zonyaka zingasebenzi.
Senze imikhankaso yophawu kuninzi lwabathengi bam, ezinye zazo bezisebenza ngokukodwa kwimigaqo yophawu, kwaye abanye baqhuba iphulo leBrand ecaleni kwemikhankaso yesiko. Kwiimeko ezininzi, sifumanise ukuba i-Brand Campaign igqwese ezinye ngexabiso eliphantsi. Yindlela entle yokuba abafikayo be-PPC bangene ngaphandle kokuchitha itoni yemali, okanye abaphathi beakhawunti ye-PPC eqhubela phambili kunye namava ukuvuselela iakhawunti ediniweyo.
tags: uhloboukuthengisa uphawuiintengiso zikaGoogleukukhangela okuhlawulelweyouphawu lwe-ppcIntengiso ye-ppc
Kutheni ii-imeyile zakho zingazenzi kwi-Inbox?
Amandla eziMxholo ezingamashumi amabini elinanye zeWordPress
Agasti 29, 2011 kwi-11: 40 AM
Wonke umntu ofuna ukuthengisa into ibenye kufuneka azi ukuba abantu bafumana ngeemvakalelo zabo.Ukuqala, sebenzisa iinkxalabo kwisihloko sentengiso sakho ukuze ukwazi ukwenza iimvakalelo zabaphulaphuli bakho ndikwafumene iWebEnrich ejonga ekujolise kuko kwePPC.